mairie-antananarivo – Fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana-CUA
Mitohy hatrany ny hetsika fadaminana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ho fanatsarana sy fampandrosoana ny tanàna . Androany maraina dia nanao fandaminana an’ireo mpivarotra amoron-dalana ny kaominina Antananarivo, izay nanomboka tetsy Soarano hatrany amin’ny tetezan’ny Behoririka, ny avy ao amin’ny Boriboritany fahatelo, izay notarihan’ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo Rado Andriamamonjisoa.
Nandray anjara tamin’ny fanakisahana sy ny fandaminana ny « agent » avy ao amin’ny boriboritany fahatelo , ny « intendance » avy ao amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely ary ireo polisy Monisipaly. Ny anton’izao hetsika izao dia mba hitsinjovana ireo fiara sy ny mpandeha tongotra satria hita tato ho ato fa miditra eny amin’ny arabe ireo mpivarotra ary maro ireo mbola mandoto ny tanàna. Nandray fepetra mivantana amin’ireo mpivarotra ny kaominina fa raha mbola misy ny tsy manaraka ny fepetra dia hisy ny fandraofana ny entana.
Efa misy ireo « agent ny tsena » miandry an’ireo mpivarotra tsy manara-dalàna. Marihana fa efa nisy ihany koa ny fanentanana amin’ny fametrahana ny dabam-pako teny an-toerana, ka efa nisy ireo nametraka izany ary mbola manentana an’ireo izay mbola tsy nanao. Tsy tapitra hatreo ny fandaminana sy ny fanadiovana fa mbola hitohy rahampitso eny Ankazomanga sy ny Boriboritany fahaenina.